အန်းဒရွိုက်၏နောက်တစ်နေ့ဗားရှင်းဟာသူ့ရဲ့လမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်ထိုသို့အဘယျသို့ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်? - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အန်းဒရွိုက်၏နောက်တစ်နေ့ဗားရှင်းဟာသူ့ရဲ့လမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်ထိုသို့အဘယျသို့ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်?” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 7th, May အပေါ်များအတွက် 2015 09.46 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အန်းဒရွိုက်၏ Google ရဲ့လာမယ့်ဗားရှင်း, အမည်ဝှက်ပေးထားသော "M", နောက်ပိုင်းတွင်ယခုလထုတ်ပြန်ကြေညာလိမ့်မည်, ကုမ္ပဏီ၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးကွန်ဖရင်အချိန်ဇယားကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်.
အကွိမျမြားစှာထဲမှာ "အန်းဒရွိုက် M က" ၏ဖျောပွထား Google I / O အချိန်ဇယား လုပ်ငန်းခွင် session များအတွက်တစ်ဦးက Android အတွက်တဦးတည်းအထူးဘယ်လို "အန်းဒရွိုက် M ကလုပ်ငန်းခွင်အမျိုးမျိုးမှအန်းဒရွိုက်၏တန်ခိုးဆောင်ခဲ့သည်" အကြောင်းပြောနေတာလည်းပါဝင်သည်.
အဆိုပါကွန်ဖရင် session ကိုအန်းဒရွိုက် M က tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများကို ကျော်လွန်. ဖွနျ့ပါမညျကွောငျးဖျောပွသ, ဖြစ်နိုင်သည်လက်ရှိအချိန်တွင် Google ရဲ့အခြား operating system ကသိမ်းပိုက်စျေးကွက်များအတွက်ကစားအောင်, Chrome OS ကို.
နှစ်ခုနေကြတဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်များပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး, Google ရဲ့ Chrome browser ပေါ်မှာသက်သက်သာအခြေစိုက်တယောက်, Linux ကို၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းပေါ်တွင်အခြား, ရှည်လျားမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့. Android ဖုန်းက M နှစ်ခုအတူတူဖြစ်စေသောဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
Google ကပြီးသားကြောင်းဦးတည်ရွေ့လျားစေတော်မူပြီ, အန်းဒရွိုက်မှ Chrome ကို features တွေကိုဆောင်ခဲ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Evernote အဖြစ်အချို့သော Android app များက Chrome OS ကိုအပေါ်ကို run ဖို့ခွင့်ပြု.
အန်းဒရွိုက် '' M က '' လည်းပိုပြီးကျယ်ပြန့်သောသူ၏အသံထိန်းချုပ်မှု feature ဖွယ်ရှိသည်. အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက် Google Now ကပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်ကသဘာဝဘာသာစကားမေးမြန်းချက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်စမတ်နှင့်ပိုပြီးနိုင်စွမ်းဖြစ်လာသည်. အတော်များများက Android စမတ်ဖုန်းစကားလုံးတို activation အတူပါလာ, အရာမျက်နှာပြင်ထိုကဲ့သို့သော "OK ကို Google က" အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်စာပိုဒ်တိုများဟူမူကားပြီးနောက်ရှာဖွေမှုများနှင့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်မှပယ်အခါသူတို့မှပြောပြီနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်. အန်းဒရွိုက် '' M က '' သူတို့ကိုအ features တွေပေါ်တည်ဆောက်ဖွယ်ရှိသည်.
ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့မေးခွန်းက "M က" ကိုအတိုကောက်အဘယ်သို့သောအ? Google ကအဓိကအသစ်ဗားရှင်းကိုဆိုလိုဖို့သကြားလုံးသို့မဟုတ် puddings များ၏အမည်များကိုအသုံးပြုသည်. တစ်အချိုပွဲကို Android ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံး Android ဗားရှင်းအမည်ရှိခံရ 1.5 မယား. တစ်ခုချင်းစီကိုအဓိကဗားရှင်းထို့နောက်အက္ခရာစဉ်ထဲမှာနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်.
Android မှာ 1.6 Donut စမယားနောက်တော်သို့လိုက်, ထို့နောက်အန်းဒရွိုက် 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread က, 3.0 ပျားလပို့, 4.0 Ice Cream Sandwich နှင့် 4.1 Jelly Bean ကို.
Android မှာ 4.4 K သည်အ KitKat ကိုအမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုရန် Google မိတ်ဖက်နက်စ်သည်ကိုမြင်, လက်ရှိဗားရှင်းအန်းဒရွိုက်စဉ် 5.0 နှင့် 5.1 နှစ်ဦးစလုံး Lollipop ဟုခေါ်ကြသည်.
အန်းဒရွိုက်က M အဘို့, Google က Malteser ဖြစ်စေဘို့မုန့်ကုမ္ပဏီအင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်အတူမိတ်ဖက်တတျနိုငျသ, နဂါးငွေ့တန်း, M က&မစ္စသို့မဟုတ်အင်္ဂါဂြိုဟ်အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ, ထိုကဲ့သို့သော marshmallow သို့မဟုတ်မေပယ်ရည်အဖြစ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးထက်ပိုယေဘုယျသက်တမ်း.
Google ကလည်းအစဉ်အလာနှင့်အတူချိုးဖျက်နှင့် Android Marmite ခေါ်နိုင်, ဒါပေမယ့်သူကကိုချစ်သို့မဟုတ်ပါက connotations ကိုမုန်းကြောင်းနှင့်အတူဆောင်ကြဉ်းနိုင်.
သငျသညျကို Android ရဲ့နောက်ကြားမှာဟုခေါ်တွင်စေမယ့်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ?
• 20 အကောင်းဆုံး Android apps နှင့်ဂိမ်းများယခုအပတ်
• Apple ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့် Android တူစမတ်နာရီများအတွက်တကယ် Wear ကြသူ?
18287	0 Android မှာ, အပိုဒ်, Google က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, Software များ, နည်းပညာ
← မဆိုအငြင်းအခုံအနိုင်ရလုပ်နည်း: Pseudo-သိပ္ပံနည်းကျ neuro-gibberish ဝေးထွက်, လူကို: 13.1ဘီလီယံနှစ်အရွယ်နဂါးငွေ့တန်းသေးသညျလူသားတို့အားဖြင့်မြင်ကြအများဆုံးဝေးသောဖြစ်ပါသည် →